Muritaaniya oo hambalyo u dirtay Madaxweyne Farmaajo. – Radio Muqdisho
Soomaaliya ayaa xuseysa maanta 58 sano guuradii kasoo wareegatay markii ay gobonimada ka qaadatay Gumeystaha, arrintaasi awgeed Dowlado badan oo Caalamka ah ayaa tahniyad usoo diray Soomaaliya, waxaana ka mid ah Murataaniya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Muritaaniya Sayid Maxamed Walad Cabdicasiis ayaa dhambaal hambalyo ah usoo diray Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabadaan awgeed.
“Mudane Madaxweyne, Saxiib, aniga oo ku hadlaya Magaca Xukuumadda iyo Shacabka Muritaaniya, , waxaan idin kugu hambalyeenayaa farxada maanta, caafimaadkiina iyo horumarkiina, waxaana idiin rajeynayaa baraare” ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxa uu xaqiijiyay in ay sii wadayaan xiriirka iskaashiga ee ka dhaxeeya labada Dal ee u adeegaya danaha labada Shacab ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Murataaniya.
Dowlado badan oo Caalamka ah ayaa hambalyo taasi la mid ah u diray Madaxda iyo Shacabka Soomaaliya oo ay ka mid tahay Mareykanka.
Maxamed Cali Axmed Rooraaye.